देउवा कांग्रेस, पौडेल कांग्रेसभन्दा माथि उठेर नेपाली कांग्रेस बनिदिनुस् : गाैतम - Harekpal
देउवा कांग्रेस, पौडेल कांग्रेसभन्दा माथि उठेर नेपाली कांग्रेस बनिदिनुस् : गाैतम
हरेकपल सम्वाददाता २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार २०:३० मा प्रकाशित
आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेन । अपेक्षित परिणाम नआएपछि कांग्रेसले केही महिनाअघि दुई चरणको जनजागरण अभियान सम्पन्न गरेको छ । यसै सन्दर्भमा हरेकपलले नेपाली कांग्रेस काठमाडौं क्षेत्र नं ९ का पूर्वक्षेत्रीय सभापति धर्मराज गौतमसँग गरेको कुराकानी :
–नेपाली कांग्रेसले भर्खरै दुई चरणको देशव्यापी जनजागरण अभियान सकेको छ यसबाट संगठनमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
नेपाली कांग्रेस देशको एउटा जिम्मेवार पार्टी हो । प्रजातन्त्रविना विकास सम्भव छैन । प्रजातन्त्रविना समाजलाई अघि बढाउन सकिँदैन । नेपाली कांग्रेसले पहिलो र दोस्रो चरणको जागण अभियान सम्पन्न गर्यो । त्यसमा म पनि केन्द्रीय प्रतिनिधिको रुपमा ललितपुर क्षेत्र नै १ मा गएँ । पार्टीले दिएको निर्देशनअनुसार हामीले भाद्र २४ गते गोदावरीमा वृक्षारोपण गर्यौँ । सो कार्यक्रममा पार्टी कार्यकर्ताको उत्साहपूर्ण सहभागिता रह्यो ।
नेपाली कांग्रेस अझै पनि डराएको छैन, हराएको छैन । हामी आफू सुध्रिन सक्यौँ, एक भएर अघि बढ्न सक्यौँ भने देशको भविष्य नेपाली कांग्रेससँग नै छ । कांग्रेससँग जनताले धेरै नै आशा र अपेक्षा गरेका छन् ।
जनजागरणका क्रममा हामीले कार्यकर्तालाई त मैदानमा उतार्न सक्यौँ, तर प्रजातन्त्रको भावना बोकेका सबैलाई हामीले उजागर गर्न सकेका छैनौँ । आशा गरौँ चेस्रो चरणको कार्यक्रमले त्यसलाई समेट्ला ।
वर्तमानमा नेपाली जनताले के खोजेका छन् नेपाली कांग्रेस अहिले कुन बाटोमा छ र कुन बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश जनजागरण अभियानले दिएको छ ।
–जागरण अभियानका क्रममा कार्यकर्तामा उत्साह देखिए पनि नेताहरु भने आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका कारण कार्यकर्ता निरुत्साहित देखिएको भन्ने आरोप छ नि, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? तेस्रो चरणको कार्यक्रममा यो कुरा व्यवस्थित होला त ?
प्रजातान्त्रिक पार्टीमा आन्तरिक छलफल हुनु स्वाभाविक हो । पत्रपत्रिकाका आएजस्तो पार्टीभित्र त्यो स्तरमा विवाद छैन । तथापि कार्यकर्ता पंक्तिको आवाज के छ भने नेताहरु मिलिदिनुस्, तपाईंहरु मात्र नेपाली कांग्रेस बनिदिनुस्, देउवा कांग्रेस, पौडेल कांग्रेसभन्दा माथि उठेर नेपाली कांग्रेस बनिदिनुस् भन्ने छ ।
केही कुरामा असहमति छ भने घरभित्र बसेर छलफल गर्नुस् र बाहिर लैजाँदा नेपाली कांग्रेस एक छ भनेर सन्देश जाने गरी प्रवाह गर्नुस् भन्ने नै छ ।
कार्यकर्ताबीचमा भने त्यस्तो गम्भीर समस्या छैन । कोही नेताले कार्यकर्तामा नभिजेका, विकास निर्माणका सहभागी नभएका व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर आफू महाधिवेशनमा अगाडि आउन प्रेरित गरेको कुरा कार्यकर्ताले राम्ररी बुझेका छन् । नेताहरुले यस्तो प्रयास गरे पनि कार्यकर्ताले को सही हो र को गलत हो भन्ने बुझेका छन् कार्यकर्ता शुद्धीकरण अभियानमा लागेका छन् ।
–कांग्रेस अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रतिपक्षमा छ, तीनै तहमा कांग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छ त ? निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर विजय हासिल गर्न नसकेका नेताहरु अहिले कत्तिको सक्रिय हुनुहुन्छ ?
जागरण अभियानले यिनै कुरालाई उजागर गर्न खोजेको हो । नेपाली कांग्रेसलाई जनताले अहिले पनि पहिलेजस्तै माया गरेको देखिन्छ । कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो, त्यो सशक्त हुँदा परिणम अझै राम्रो आउन सक्थ्यो, दुईतिहाइको सरकारले अहिले जसरी पनि पेलेर जाने मानसिकता बनाएको छ, त्यो व्यवहारमा नै देखाउँदै आएको छ ।
यसलाई चिर्नका लागि कांग्रेसले खेल्नुपर्ने भूमिका अझै नपुगेको महसुसचाहिँ कार्यकर्तामा भएको छ । चुनावमा विजयी भएका राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घाेषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार काम गरे कि गरेनन्, आफ्ना कार्यकर्ताका लागि मात्रै गरे कि भन्ने कुरा अबका दिनमा नेपाली कांग्रेसले जनतालाई बुझाउन जरुरी छ ।